Ku samee is-sawirkaaga qaab joomatari ah | Abuurista khadka tooska ah
Kuwani waa tillaabooyinka la raaco si loo sameeyo kanaga sawir iskiis ah qaabka joomatariisticmaalka Adobe Illustrator.
Sideen u sameysanaa sawir is-joomatari ah?
1: Xulo sawir aad ku arki karto wajiga iyo garbaha.
2: Samee a cusub 600x480px dokumenti ku jira Adobe Illustrator oo ku hagaaji lakabyada sidan:
Sawiridda halka aad ka dhigi doonto sawirka.
Sawir u dhig hage ahaan.
Sawir laba jibbaaran oo leh cabirro la mid ah dukumiintiga, adigoo ku rinjiyeeyay cawlan.
3: Adiga oo adeegsanaya sawirka tixraaca ah, ku qaabee qoraalkaaga "Eraser", adoo adeegsanaya aaladda Cadayan. Samee xariiqyo toosan, fududeeynaya faahfaahinta ugu badan ee suurtogalka ah isla markaana xakamey lakabka saddexaad.
4: Deji mugdi tirtirka 30% oo xir lakabka adoo isticmaalaya qufulka. Bilow inaad sawir ka sameyso salka hoose ilaa hore adoo isticmaalaya qalab qalin. Adiga oo isticmaalaya 1pt qaro weyn iyo madow, timaha ku muuji adoo adeegsanaya xariiqyo toosan.
5: Shaatiga nuska u dhig, ka dibna koobi oo dhaji hore, isticmaal aaladda "Ku celi" oo wareeji wixii la soo laba-jibbaaray. Xulo labada dariiqo oo isticmaal Pathfinder> Unite Option, si aad u ku biir labada qaab.
6: Khariidad qoorta shaati adigoo isticmaalaya qalab geesoolayaasha, ka dibna ku dheji qaababka salka qoorta.
7: U adeegso isla nidaamka qaabka wajiga; sawir sideed geesood oo dooro meelaha laga gudbo ee kore.
Ku wareeji fallaarta cad iyo / ama ku hagaaji adoo adeegsanaya aaladda miisaanka, adigoo suurtagal ah inaad nuqul ka sameysid qaabkan una isticmaasho wejiga, ka dibna nuqul kale, isticmaal Pathfinder> Minus Front si aad u gooyso qaabka qoorta.
8: Si aad faahfaahin ugu darto, isticmaal Qalabka Qaabka iyo qalabka qalinka.
9: Riix D sawirkuna wuu muuqan doonaa.
10: Si bushimaha loo isticmaalo lix geesle. Kala kala bixi dhinacyada oo isticmaal qalab cabbir in la beddelo qaabka. Kadib sawir saddexagal oo isku dheji dhexda.
Isticmaal Pathfinder> Minus Front si aad u tirtirto saddexagalka kore ee bushimaha, kadibna nuqul ka sameyso oo ku dhejiso bushimaha hortooda, bedel cabirka qaabka xarunta.
11: Si aad indhaha u sameysid, isticmaal sagxad gees ah adoo isticmaalaya Qalabka -Shift + E-Eraser Tool-, ka saar qaybta hoose ee qaabka.
Kadib u wareeji qaabka adoo adeegsanaya Shift + Alt si aad u nuquliso, nuqul ka sameysid qaabka aasaasiga ah una adeegsato Joogitaanka Joogtada ah ee Pathfinder, kaas oo noqon doona indha-indheynta, mar labaad nuqul si loo sameeyo jeedal. U sawir hal octagon yar iriska, ka dibna u beddel si aad u sameyso qaybta hoose ee indhaha.
12: Sanka, mar kale samee hal gees. Wax ka beddel qodobbada kala duwan iyo ku dar xoogaa dhibco barroosinka salka salka, ka dib sawir dhowr octagons iyo qaabab kale oo fudud, adoo ku daraya faahfaahin iyo mug.
13: Dhamee sawirka, ku dar midabka iyo faahfaahinta aad rabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Kusamee sawirkaaga qaab joomatari ah